अब अनलाईनवाटै ५ लाख रुपैया सम्म ऋण पाइने्, के के चाहिन्छ कागजात ? • raradiodarpan.com
अब अनलाईनवाटै ५ लाख रुपैया सम्म ऋण पाइने्, के के चाहिन्छ कागजात ?
अब अनलाईनवाटै ५ लाख रुपैया सम्म ऋण पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय (अनलाइन) माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ जारी गरेको छ । यसका केही प्रावधानहरु छन् । महिनामा निश्चित आम्दानी भएका र बैंकमा तलब जम्मा हुनेहरुका लागि यो निकै राम्रो अबसर हो ।